यसरी रोकिएको छ नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ यसरी रोकिएको छ नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ
यसरी रोकिएको छ नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ
अन्तराष्ट्रिय चलन अनुसार सिमेन्टको गुणस्तर र प्रकार छुट्याउन ग्रेडिङको व्यवस्था हुन्छ । जस्तो कि, सिमेन्टलाई ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड भनेर यसको गुणस्तर छुट्याइन्छ । यहि ग्रेड अनुसार उपभोक्ताले आफूलाई चाहिएको सिमेन्ट रोज्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला कम्पनीहरूले यसरी ग्रेड छुट्याएको सिमेन्ट मात्र प्रयोग गर्छन् । नेपालमा हाइड्रो पावर, बाटो, पुल जस्ता ठूलो प्रोजेक्ट हात पारेका कम्पनीहरूले सधै ५३ ग्रेड भएको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यसको सिधा असर भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई परेको छ । किनकी नेपाली सिमेन्टहरुको अहिलेसम्म अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार ग्रेड छुट्याइएको छैन । नेपाली सिमेन्टलाई पिपिसी, ओपिसी र पिएससीमा बर्गिकरण गरिएको छ । यो सिमेन्ट बर्गिकरण गर्ने कुनै स्थापित तरिका नै होइन ।
सामान्य उपभोक्ताले त देशमा उत्पादित सिमेन्ट जस्तो छ त्यस्तै उपभोग गर्ने भए तर ठूला प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका कम्पनीले भने भारतबाट सिमेन्ट ल्याइरहेका छन् । ‘नेपाल सरकारले ग्रेडिङको व्यवस्था नगर्दा ठूला प्रोजेक्टले नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्दैनन्, गरे पनि कम प्रयोग गर्छन्,’ व्यवसायी भन्छन्, ‘यसले गर्दा नेपाली सिमेन्टलाई मार परिरहेको छ ।’
के नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छैनन त ?
पक्कै छन् । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने व्यवसायी र गुणस्तरीयको मान्यता दिने नियमक निकाय गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले समेत नेपाली सिमेन्ट अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसारका ग्रेडिङ गर्न सकिने स्तरका भएको बताइरहेको छ ।
सिमेन्ट उत्पादकहरुका अनुसार नेपाली सिमेन्ट पनि ३३, ४३ र ५३ ग्रेड अनुसारको गुणस्तरीय छन् तर बोरामा लेख्न मात्र पाएका छैनन् । ठूला प्रोजेक्टहरूले समेत नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छन् भनेर स्वीकारेका छन् तर पनि बोरामा उत्त कुरा उल्लेख नहुँदा उनीहरूले किन्न सकेका छैनन् । बोरामा ५३ ग्रेड भनेर लेख अनि मात्र प्रयोग गर्छौं भनेर नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीले भन्ने गरेका छन् ।
यो बिषयमा कमिसनको ह्वास्स गन्ध आउने कुरा के हो भने ठूला प्रोजेक्टका लागि विदेशका ग्रेडिङ युक्त सिमेन्ट ल्याउँदा भन्सार छुटको व्यवस्था छ। एकातिर नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ नै नगर्ने अर्को तिर विदेशबाट ल्याउने सिमेन्टलाई नै भन्सार छुट दिने यस्तो नमिल्दो अवस्था त्यतिकै त भ्रष्ट मानसिकताका हाम्रा नीति निर्माताहरुले कायम राखेका होइन होलान् ?
नेपाली सिमेन्टलाई ग्रेडिङ अनुसार बर्गिकरण गर्ने पहल नभएको होइन् । व्यवसायीले सात, आठ वर्षदेखि ग्रेडिङ लागु गर्न भनिरहेका छन् । तर, कुर्चीमा बसेका कर्मचारीले गम्भिरतापूर्वक नलिदा ग्रेडको काम हुन सकेको छैन् । ग्रेडिङ छुट्याउने कामको जिम्मा पाएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले संधै ‘काम भइरहेको’ बाहेक अरुकेही जवाफ दिंदैन ।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । तर यो वाक्यांश दोहोर्याएको वर्षौ भइसकेको छ ।
नेपालमा हाल ५० भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू रहेका छन् । नेपाली सिमेन्टमा पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ । नयाँ नयाँ सिमेन्ट थपिदै छन् भने भएकाले पनि प्रतिस्पर्धी स्किम ल्याइरहेका छन् । भूकम्पपछिको पूननिर्माणमा सिमेन्टको खपत धेरै हुने भएकाले सिमेन्ट उद्योगीले पनि त्यसै अनुसार आफूलाई तयार गरेर राखेका छन् ।
नेपालमा पूर्वाधारका काम बढ्दै गएको, पुननिर्माणको काम भइरहेको र विदेशी लगानी समेत नेपाल भित्रने तरखर भइरहेकाले नेपाली सिमेन्टलाई ग्रेडिङ गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था भएमा स्वदेशी सिमेन्टको प्रवर्धनमा सहजता थपिने थियो ।
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: यसरी रोकिएको छ नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ